Userscripts များ အကြောင်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Userscripts များ အကြောင်း
29-05-2011, 11:00 PM
တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ အမြဲလိုလို ရောက်ဖြစ်နေတဲ့ အင်တာနက်ကမ္ဘာထဲမှာ အားလပ်ချိန်တိုင်း ဟိုဒီလည်ပတ်ရင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အချိန်တွေကုန်ဆုံး သွားတတ်ကြပေမယ့် ဒီ အင်တာနက်ကနေ ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘာတွေများ ရယူနိုင်ခဲ့ကြပြီလဲ ??
အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အသုံးချတဲ့ ပုံစံခြင်းတော့ တူကြလိမ့်မယ် မထင်ပါဘူး - တစ်ချို့က ဖျော်ဖြေရေးအတွက် - တစ်ချို့က ပညာရေးအတွက် - တစ်ချို့က စီးပွားရေး - လူမှုရေးတွေအတွက် စသဖြင့် .... ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်နဲ့ ပတ်သတ်လာခဲ့ကြပြီ ဆိုရင် ကောင်းတာ မကောင်းတာ နောက်ထား - လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာ စိတ်ဝင်စားရာအလိုက် အကြိုက်ဆုံး web sites - အမြဲ ဝင်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ web sites ဆိုတာမျိုး ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ Facebook ပဲ ဆိုကြပါစို့ - Facebook နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ခုနောက်ပိုင်း လူငယ်တော်တော်များများ Style တစ်ခုလို သုံးလာကြပြီ - ဂိမ်းတွေ ဆော့ကြတယ် - သူငယ်ချင်းတွေ ရှာကြတယ်။ Facebook ကနေ တစ်ဆင့် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း အသိမိတ်ဆွေတွေ အများကြီး ရခဲ့ပြီ - ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းတွေလည်း မနည်းမနောဆော့ခဲ့ဖူးပြီ - အဲ့တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ Games အတွေ့အကြုံတွေကို Top 20 Facebook Games ဆိုပြီးလည်း ရေးထားပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းလည်း Facebook ထဲမှာပဲ ဆော့လို့ရတဲ့ဂိမ်း အသစ်တွေ ထပ်ပေါ်လာတာ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် Facebook သုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကာလတစ်လျှောက် တကယ်ရော စိတ်ကျေနပ်မှု ရခဲ့ရဲ့လား။
တကယ်တော့ လူဆိုတာ ဘယ်တော့မှ လိုလားချက် မပြည့်ဝနိုင်တဲ့ သက်ရှိတွေလို့များ ပြောရမလား ?? Facebook နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော့်မှာ သဘောမကျစရာတွေ တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် ကျွန်တော် တစ်ချိန်က Facebook မှာ လယ်စိုက်တဲ့ FarmVille ဂိမ်းဆော့ခဲ့တယ်။ သူ့ သဘောက မျိုးစေ့လေးတွေ ချပြီးသွားရင် နောက်တစ်နေ့ ( သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ) စောင့်ပြီးတော့မှ ပေါက်လာတဲ့ အပင်လေးတွေက အသီးအနှံလေးတွေကို ပြန်ရိတ်သိမ်းရတာ။ ကျွန်တော်က တစ်ခါစိုက်ထားပြီးရင် ပုံမှန် ပြန်ဝင်ကြည့်ဖြစ်လေ့ မရှိဘူး - သူက နောက်တစ်ရက် ကြာမယ်လို့ ပြောထားရင် နောက်ရက် ဝင်ကြည့်ရမယ် ဆိုတာ သိပေမယ့် ဘယ်နှစ်နာရီ ပြန်ဝင်ကြည့်ရမယ် ဆိုတာမျိုးကို တွက်ပြီး မှတ်မထားမိတော့ တစ်ခါတစ်လေ နောက်ကျပြီး အပင်လေးတွေ သေသေသွားကြတယ်။ အပင်သေတော့ ပိုက်ဆံ မရဘူးပေါ့ဗျာ။ နောက်ပြီး ခဏခဏ ရောက်လာတတ်တဲ့ လက်ဆောင်တွေကို ကလစ်တစ်ခါ ပေးမှ တစ်ခုရတာမျိုး ကျွန်တော် မကြိုက်ဘူး။ Neighbors လိုလို့ Add ချင်ပြန်ရင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း တစ်ယောက်ချင်းစီ လိုက် Add နေရတယ်။ ပြောရရင် အချိန်ကုန်တယ်ပေါ့ဗျာ။ နောက်ပြီး ဒီနေ့ သူငယ်ချင်း အယောက် ၁၀၀၀ ရှိတယ်ထား - နောက်နေ့ကျတော့ ၁၀၀၀ မပြည့်တော့တာမျိုးလည်း ဖြစ်ဖူးကြမယ် ထင်တယ်။ အလွယ်ပြောရရင်တော့ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကိုယ် Friend list ကနေ ဖျက်သွားတာမျိုးပေါ့ - ဒီလိုဆို ဘယ်သူက ဖျက်လို့ ဖျက်သွားမှန်းလည်း မသိ။ ပြန်ကြည့်လို့ ကလည်း မလွယ်။ အဲ့တာမျိုးတွေလည်း ကျွန်တော် မကြိုက်ဘူး။
နောက်ပြီး Mafia ဆော့ခဲ့ဖူးတယ်။ Mafia မှာ Job help ခေါ်တယ် ဆိုတာ ရှိတယ် - သူက တစ်ခါခေါ်ရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ လူအရေအတွက်အတိုင်း ကိုယ့် သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့် Job ကို ဝင်ကူမှ ပိုက်ဆံရော Mission ရော အပြည့်ရတယ်။ အဲ့မှာ ဖြစ်တာက Job help ခေါ်ရင် လူစောင့်ရတဲ့ ပြဿနာ - ဘယ်သူတွေ ဘယ်တော့ ဝင်ကူမလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် လူစောင့်ရတာမျိုး လုံးလုံး သဘောမကျဘူး - Friend lists ထဲက လူတွေကလည်း အဲ့တုန်းက Mafia ဆော့ကြတာ နည်းတော့ သိပ်လည်း အကူအညီတောင်းလို့ မရဘူး - Mafia ဆော့တဲ့ သူတွေကို ရှာပြီး Add ထားရင် ရပေမယ့်လည်း မသိတဲ့ သူတွေကျပြန်တော့ Job help လေး ကူခိုင်းချင်တာ တစ်ခုတည်း အတွက်နဲ့ Friend lists ထဲ မထည့်ချင်ဘူး - အဲ့တာနဲ့ ဘယ်လို လုပ်လဲ ဆိုတော့ Facebook အကောင့်ကို ၁၀ ခု မက လုပ်လိုက်တယ်။ နာမည်တွေတော့ မျိုးစုံ ပေးတာပေါ့ဗျာ - ဥပမာ - မိုက်ခဲလေး - လေးခဲမိုက် - ခဲမိုက်လေး စသဖြင့်ပေါ့ - ပြီးတော့ ဒီဘက် အကောင်ကနေ Job help ခေါ်ရင် ဟိုဘက် ၁၀ ကောင်ကနေ ခေါ်တဲ့ Job help ကို ပြန်လိုက်ကူတယ်။ ဒါဆို ဘယ်သူ့ကိုမှ မစောင့်ရတော့ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့လို လုပ်တာတွေ ကြာလာပြန်တော့ စိတ်က မသက်မသာ ဖြစ်လာပြန်ရော။ Job help တစ်ခုကို အကောင့် ၁၀ ခုကနေ ဝင်ကူဖို့ ဆိုတာ Facebook အကောင့်ကို ဟိုဘက်ဝင်လိုက် ဒီဘက်ထွက်လိုက် ( ၁၀ ) ခါ မက လုပ်ရတယ်လေ - အဲ့တာကို သဘောမကျတော့ပြန်ဘူး။
စသဖြင့်ပေါ့ - ခုဖော်ပြခဲ့တာတွေဟာ Favourite websites တွေ ဆိုပေမယ့် စိတ်တိုင်းမကျ စရာတွေ ရှိတတ်တယ် ဆိုတာ မြင်သာအောင် ပြောပြတာပါ။ ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေ စိတ်တိုင်းမကျမှုမျိုးတွေ လိုအပ်ချက်တွေက Facebook မှာမှ မဟုတ်ပါဘူး - တစ်ခြား ကျွန်တော်တို့ သုံးနေကျ Google - Youtube - Twitter - Flickr - MySpace စတဲ့ Websites တွေမှာလည်း အသုံးပြုကြတဲ့ ပုံစံပေါ် မူတည်ပြီး သဘောမကျကြတဲ့ အချက်တွေ ရှိတတ်ပါတယ် - တကယ်တော့ ဒီလို အခက်အခဲလေးတွေ အလိုမကျမှု လေးတွေဆိုတာ တစ်ချိန်က ကျွန်တော်တို့ ဖြေရှင်းနည်း မသိခဲ့လို့ပါ။ ဖြေရှင်းနည်း မသိတော့ စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ရတယ်။ လူပင်ပန်းရတယ်။ အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့တယ်။ အဲ့တော့ Favourite websites တွေကို Browser ကနေ Access လုပ်တဲ့ အခါမှာ ကိုယ် မလိုချင်တာတွေ ပျောက်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံအတိုင်း တော်တော်များများ တူလာအောင် - လိုချင်တဲ့ Features လေးတွေ များများစားစား ပါလာအောင် ဘယ်လို ဖန်တီးယူကြမလဲ။
Userscripts အသုံးပြုခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ
အတိုချုံး ပြောရရင် Userscripts တွေ အသုံးပြုခြင်း အားဖြင့် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးသလို အလိုမကျ ဖြစ်နေတဲ့ လိုလားချက်တွေကို ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာလေးတွေ တစ်ခုနှစ်ခုလောက် လေ့လာကြည့်ရအောင် - ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ဂိမ်းဆော့ခဲ့စဉ် တစ်ချိန်တုန်းက Facebook account တွေကို ဝင်လိုက် ထွက်လိုက် လုပ်ရတာမျိုးကို သဘောမကျဘူးလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီ အခက်အခဲကို ပြေလည်နိုင်စေဖို့ Facebook Switch Accounts ဆိုတဲ့ Script ရှိပါတယ်။ Google Chrome သုံးသူများ သူ့ကို ဒီနေရာမှာ တိုက်ရိုက် Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ကို Install လုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ Facebook ထဲကို ဝင်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း Switch Accounts ဆိုတဲ့ Menu တစ်ခု အပိုပါလာတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သူကနေ တစ်ဆင့် Add Account ဆိုတာကို ဆက် Click ပေးပြီး ပေါ်လာမယ့် Box မှာ လက်ရှိ Account ကနေ Switch လုပ်ချင်တဲ့ Acoount ကို ဖြည့်ပေးပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ နောက် Account တစ်ခုကို အဝင်အထွက် ခဏခဏ လုပ်စရာမလိုပဲ Click တစ်ချက်နဲ့ ပြောင်းနိုင်ပါပြီ။
ဒါတင်ပဲလား - မကသေးပါဘူး - ဥပမာ FarmVille မှာ Neighbors လို နေတဲ့သူတွေ - အလိုလျောက် Neighbors Add ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်း Facebook Auto Neighbor Adder ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ သူ့ကို သွင်းထားပြီး Neighbor page ကို သွားလိုက်တာနဲ့ ရှိနေတဲ့ သူတွေကို အလိုလျောက် ဆင့်ခေါ်စာ ပို့သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီလောက်နဲ့တင် မပြီးသေးဘူး - Farmville Harvest Calculator ဆိုတာ ရှိသေးတယ်။ သူကတော့ စိုက်ပျိုးချိန်နဲ့ ရိတ်သိမ်းချိန်ကို အလိုလျောက် တွက်ချက်ပေးနိုင်တယ်။ အရိတ်နောက်ကျလို့ လယ်ပျက်ရတာမျိုး မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ -
နောက်ပြီး Unfriend Finder - သူကတော့ Facebook မှာ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို သူ့ရဲ့ Friend lists ထဲကနေ ဖျက်ထုတ်လိုက်တာမျိုး ရှိရင် ကိုယ့်ကို ဘယ်သူကတော့ မင်းကို သူငယ်ချင်း အဖြစ်က ရပ်စဲလိုက်ပြီ ဆိုတာ အသိပေးပေးတယ်။
နောက် ခဏခဏ Gifts တွေ ရောက်ရောက်လာပြီး တစ်ခုချင်းစီကို Accept လုပ်ရတာ ပျင်းနေသလား - ဒါဆိုလည်း LotsGiftsAccepter ဆိုတာ ရှိတယ်။ သူက ဝင်လာသမျှ Gifts တိုင်းကို Auto လက်ခံပေးသလို ကိုယ့်ဆီ ပို့ပေးတဲ့ သူတိုင်းကိုလည်း အလိုလျောက် Gifts ပြန်ပို့ပေးတယ်။ အကောင့်ထဲမှာ လူတွေ အရမ်းများနေလို့ ဖျက်ထုတ်ချင်ပြန်ပြီ ဆိုရင်လည်း FacebookDeletes ဆိုတာ ရှိတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့် account ထဲမှာ လူရှိပေမယ့် ကိုယ်ဆော့တဲ့ ဂိမ်းမှာ သူငယ်ချင်းနည်းနေတယ် ဆိုပြန်ရင်လည်း ကိုယ့် Friend lists ထဲက အဲ့ဂိမ်းဆော့နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို Facebook Invites သုံးပြီး တစ်ခါတည်း အများကြီး Invite လုပ်လို့ ရတယ်။ ဒါတင်မက FarmVille မှာ Bonuses ယူတာ - အကောင်မွေးတာ - ဆီယူတာ - ကြက်ဥဖောက်တာ - ဆိုတာတွေ အားလုံးကို တစ်နေရာတည်းကနေ စီမံခန့်ခွဲပေးမယ့် FarmVille Wall Manager ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်။
ခုဖော်ပြခဲ့တာတွေက Userscripts တွေ အသုံးပြုခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေထဲက ကဏ္ဍအသေးအဖွဲ လေးတွေပါ။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကဏ္ဍအစုံက Userscripts တွေကို ဒီနေရာကနေ တဆင့် သွားရောက် ကြည့်ရှု အသုံးချနိုင်ပါသေးတယ်။
Userscripts များ အသုံးချနိုင်စေရန် ပြင်ဆင်ခြင်း
နောက်ပြီး ခု ဥပမာ ပေးခဲ့တဲ့ နေရာမှာ Google Chrome ကနေ အသုံးပြုပုံကိုပဲ ကျွန်တော် အဓိက ဥပမာပေး ပြောခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းက Google Chrome ဟာ Userscripts သုံးမယ်ဆိုရင် တစ်ခြားဘာမှ ထပ်သွင်းစရာမလိုပဲ Support ပေးထားပြီးသား ဖြစ်နေလို့ပါ။ တကယ်လို့ မိသားစုဝင်များ Firefox သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Userscripts တွဲဖက် အသုံးပြုလို့ ရအောင် အရင်ဆုံး Greasemonkey သွင်းထားဖို့ လိုပါတယ်။ Safari မှာ ဆိုရင်တော့ GreaseKit ဆိုတာ သုံးရပါမယ်။
Userscripts အသုံးပြုခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ
ရွေးချယ်မှု ရှိလာတဲ့ အကြောင်းအရာတိုင်းမှာ ကောင်းကျိုးဆိုတာ ရှိသလို ဆိုးကျိုးဆိုတာလည်း တွဲပါလာတတ်ပါတယ်။ Userscripts ဆိုတာဟာ Scripting language ကို အသုံးပြုပြီး ရေးထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သူရေးထားတဲ့ Language ကို နားမလည်တဲ့ သူတစ်ယောက်အတွက် တွေ့သမျှ Userscripts တိုင်းကို မဆန်းစစ်ပဲ သုံးမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ Userscripts တွေမှာ ကိုယ့်ကွန်ပြူတာကို ပျက်စီးစေနိုင်မယ့် ( ဒါမှမဟုတ် ) ကိုယ့်ရဲ့ Personal informations ကို ခိုးယူမယ့် Scripting language တွေလည်း ရောပါနေတတ်လို့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် Userscripts တစ်ခုကို သုံးမယ်လို့ စိတ်ကူးရှိရင် ဖြစ်သင့်တာ -
( ၁ ) Rating ကို ကြည့်ပါ။
( ၂ ) Posts တွေကို လေ့လာပါ။
( ၃ ) Fans တွေကို စစ်ဆေးပါ။
( ၃ ) Installs အရေအတွက်ကို အကဲခတ်ပါ။
ဒါမှသာ Userscripts တွေကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ အသုံးချရာ ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ Userscripts များ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိသားစုဝင်များ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးချနိုင်ကြပါစေ။
Last edited by KznT; 30-05-2011 at 02:21 AM..
ချစ်သမီး, arkaraung, AZM, bagothar85, bonge, g00gle, ko myo, minthike, minthumon, naive demon, tu tu, zo
how to, internet, user guide
အသုံးပြုသင့်သော DNS Servers များ အကြောင်း KznT အထွေထွေဗဟုသုတ025-11-2010 02:33 AM